जापानमा नेपालीहरुको संख्या घ’ट्यो, अहिले कति नेपाली छन त? जानौं – Eps Sathi
जापानमा नेपालीहरुको संख्या घ’ट्यो, अहिले कति नेपाली छन त? जानौं
October 20, 2021 343
जापानमा नेपालीको जनसंख्या केही घ’टेको छ। गतबर्ष ९९ हजार नाघेको नेपालीको जनसंख्या हालैको त’थ्यांक अनुसार केही घ’टेको पाइएको हो। जापानमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुको जनसंख्या ९७,०२६ रहेको जापान सरकारको हालैको प्र’तिवे’दनमा उल्लेख गरिएको छ। तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै डिपेन्डेन्ट भिसामा ३१,९१३ जना रहेका छन।
दोश्रोमा स’र्वाधि’क बिधार्थी १८,४५९ जना रहेका छन। रो’जगार अन्तरगत (इन्टरनेशनल स’र्भिस) भिसा स्टा’टसमा १७,९९७ जना रहेको पाइएको छ। कुक लगाएत अन्य भिसातर्फ १५,७८० जना नेपालीको बसोबास रहेको छ। थाइ बसोबास गर्ने नेपालीहरुको जनसंख्या ब’ढेर ५,४२३ पुगेको छ। बि’शेष काम (तोकुतेइ काचुदोउ) भिसामा रहनेको संख्या ५,०२२ जना रहेका छन।
जापानी नागरिकको प’ति वा प’त्नी को रुपमा बै’वाहिक स’म्ब’न्धमा रहनेको संख्या पनि बढेर १,०९५ पुगेको छ। लामो अवधीको बसाई (तेइजिउ) भिसा पाएका नेपालीको संख्या ८९३ रहेको छ। यसैगरी प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा ४४१ जना नेपाली जापानमा रहेको पाइएको छ। बि’शेष थाइ बसोबास गर्ने नेपालीको संख्या भने केवल ३ जना रहेको छ। श्रोत : बिज्ञान कुमार थापा
Prevकार्तिक ४ गतेबाट सामलिङ पावर कम्पनीको आइपिओ खुल्दै, कति दिने आवेदन?
Nextतेह्र बर्ष कोरिया बसेर फर्केका विरेन्द्रले बागलुङमा खोले १ करोड लगानीमा आधुनिक कृषि फार्म
नौ हजार श्रमिक कोरिया जाने बाटो खुल्यो, सातामा दुई सय जना पठाइँदै